Hery Rajaonarimampianina : “Mila fitoniana ny fampandrosoana eto amin’ny firenena” -
AccueilSongandinaHery Rajaonarimampianina : “Mila fitoniana ny fampandrosoana eto amin’ny firenena”
Hery Rajaonarimampianina : “Mila fitoniana ny fampandrosoana eto amin’ny firenena”
17/07/2018 admintriatra Songandina 0
Tsy ampihambahambana no nanambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina omaly, teny By-Pass, nandritra ny fandraisam-pitenenana tamin’ny lanonam-pametrahana ny vato fototry ny fanombohan’ny asa fanamboarana ny Rocade Atsinanana sy Avaratra Atsinanana, fa mila fitoniana ny fampandrosoana eto amin’ny firenena sy ny fanatanterahana ireo tetikasa maro isan-karazany sy isan-tsokajiny. Voalaza fa tsy hisy fampandrosoana tanteraka eto amin’ny firenena raha tsy misy ny fitoniana. “Mila mifanome tanana isika raha te hampandroso marina”, hoy hatrany izy.
Nambarany mantsy fa miainga amin’ireo seranan-tsambo goavana eto amin’ny firenena, toa ny any Toamasina, Toliara ary Mahajanga no hisian’ny tetikasa amin’ny fampivelarana mba hahamora ny fivezivezen’ny vokatra, ny entana ary indrindra ny olona. Izay indrindra, hoy izy no hananganana fotodrafitrasa toa ny Rocades Atsinanana sy Avaratra Atsinanana.
Ankoatra izay, voalaza ihany koa fa ho famahana ny olan’ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra no hisian’ny fanitarana. “Mirefy 37 km ny lalana amboarina eto Antananarivo Renivohitra. Misy ny lalana mampitohy an’i Tsarasaotra amin’Ivato, ary toraka izany koa ny eny Andohatapenaka mampitohy an’Ivato. Izany no atao mba hanamaivanana ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Tsapantsika tsara ny fahavoazana amin’izany fitohanan’ny fiara izany. Lany eo ny fotoana, izay tokony hampandrosoana, lany ihany koa ny solika. Noho izany indrindra, ho an’ny vahoaka no hanaovana sy hananganana fotodrafitrasa maharitra sy ho lovain’ny taranaka…”, hoy ny Filoham-pirenena.
Voalaza ihany koa fa tsy ny lalana ihany no hamboarina eto amin’ny firenena fa mijery manokana ny sosialim-bahoaka ihany koa ny Fitondram-panjakana tarihiny. Anisan’izany ny hanomezana tambiny manokana ho an’ireo tompon’ny tany sy ny toeram-ponenana lalovan’ity lalam-baovao vao atao ity, sns.
Mibaribary. Hitam-poko, hitam-pirenena izao fa mpanakorotana, ary tsy tia filaminana ry Marc Ravalomanana sy ny antoko Tiako i Madagasikara, na ny Tim. Noho izay indrindra, nitondra ny heviny mahakasika ny fomba fitantanan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, ...Tohiny